Bliquo, mashiinka raadinta wakhtiga firaaqada ee magaalada ee Android | Androidsis
Bliquo, mashiinkaaga raadinta waqtiga firaaqada ee Android
Bliquo ee Android Wuxuu ururiyaa macluumaadka ugu badan ee ku saabsan wakhtiga firaaqada ee magaalooyinka sida qabashada, ka jar ama 11870 si aadan waxba u dhaafin oo aad gacanta ugu hayso, codsigan oo horeba loogu heli jiray aaladaha iPhone ayaa hadda soo gaadhay annaga. android. Dhammaan macluumaadka ku saabsan kumanaan makhaayado ah, fikradaha isticmaalayaasha iyo soo jeedinta, ee laga heli karo adiga Qalabka Android.
Isticmaalka Bliquo Aad bay u fudud tahay oo marka codsiga la fuliyo oo geopositioning waxay muujinaysaa menu leh xulashooyin kala duwan oo aad ka heli karto agagaarka meesha aad joogto, sida makhaayadaha, baararka, kafateeriyada iyo meelaha lagu caweeyo. Riixitaanka ikhtiyaarka la doortay ayaa ina tusinaysa liiska meelaha leh qiimaynta ay bixiyeen isticmaalayaasha arjiga ee ku sugnaa meesha la doortay.
Meel kasta oo la booqdo gudaheeda waxaan ka helnaa sharraxaad kooban oo ku saabsan goobta iyo fikradaha ay ku qeexeen isticmaalayaashu. Waxaa naloo soo bandhigay ciwaanka saxda ah ee goobta iyo suurta galnimada in aan sameyno wado meesha aan joogno ilaa aan ka gaarno goobta iyo xiriir taleefan oo aan awoodno in aan la wici karno.
Markaan helno fikradaha isticmaalayaasha kale ee boggaga si ay u booqdaan, waxaan gelin karnaa keenna si aan uga tagno caawin ama talo soo-booqdaha mustaqbalka.
Waxaa jira codsiyo kale oo leh sifooyin la mid ah laakiin kan waxaan aad uga helaa bilicdeeda, interface-keeda iyo goobta ay ku fududahay. Waxaa laga yaabaa in lagu dhejiyo jajab, in la yiraahdo waxay leedahay qaybo yar, inkastoo macquul ahaan waxaan u maleynayaa inay ballaarin doonaan. Tusaale ahaan, waxaan ka fikiri karaa qayb ka mid ah taallooyin, aqoon-is-weydaarsiyo farsamo ama meelo qurxoon.
Guud ahaan, aad bay u guulaysataa, waxaanan kula talinayaa kuwa aan garanayn. Waxaad leedahay website-ka rasmiga ah Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Bliquo, mashiinkaaga raadinta waqtiga firaaqada ee Android
Ma ku nooshahay Muntaner mise halkaas? Waan dhownahay! Isagu!
Waxaad iga caawin doontaa isbedelka ROM-ka haha!
BIDI-gu kuma jiro suuqa mana ka shaqeeyo Android 1.5 (Cupcake)
Ku jawaab pecchia22
Codsi cajiib ah, shaki la'aan. Waxay ahayd mid ka mid ah waxyaalihii aan ka xiisay iPhone-ka, oo hadda waa taas! 😀
Dhadhankayga, waxay tusinaysaa boggaga in ka badan oo waafaqsan waxa aan raadinayo marka loo eego waxa Google Places tuso, tusaale ahaan. Waxaanan mar hore rajaynaya inaan tijaabiyo dalabyadaas… 😀
Uma muuqdo suuqa geesigeyga….
Runtii, kama muuqato geesiga, waa inaan sugno cusboonaysiinta android ...
David - bliquo dijo
@chema @bboy_javi @ pecchia22: Runtii, wakhtigan xaadirka ah bliquo kuma habboona Android 1.5 waxayna u muuqataa in Heros Orange uu sii wado ROM-kaas. Taasi waa sababta aadan u arki karin bliquos midkoodna suuqa ama BIDI.
Waa wax aan xallin doono bilawga 2010 markaa waa inaad xoogaa sugtaa.
Haa, anaga waxaa leh Muntaner, waad joojin kartaa markasta oo aad rabto waxaanan kugu martiqaadeynaa qaxwo (waxbixintu waxay sidoo kale ansax u tahay isticmaalayaasha kale 🙂)
U jawaab David - bliquo
Waxaan samaynay casriyeyn ku saabsan arjiga suuqa, oo hadda waxay ku habboon tahay 1.5. Markaa waad rakibi kartaa Waxaad noo soo diri kartaa faallooyin haddii aad qabtid wax su'aalo ah, talooyin ama dhibaatooyin ah
Motorola Milestone, toobiyaha kumbuyuutarrada
Maqnaansho la'aanta, wadashaqeynta guud ee udhaxeysa Android iyo PC